Inona ny atao hoe Advertising Integrated?
Alahady, Septambra 23, 2012 Alakamisy Oktobra Oktobra 11, 2012 Douglas Karr
Matetika izahay manome porofo amin'ireo mpanjifanay fa ny marketing amin'ny fantsona marobe dia fomba fampitomboana vokatra manerana ny fantsona rehetra, fa tsy iray fotsiny. Nanoratra momba ny fahatongavan'i Fahitalavitra sosialy, fa ny maodelin'ny dokam-barotra manodidina ny fahita fahita amin'ny fahitalavitra nentim-paharazana dia miova koa, mampiditra fampiharana, haitao finday ary media sosialy. Lahatsary mahafinaritra ity BBR / Saatchi & Saatchi manazava ny doka mifangaro.
Tags: dokam-barotraIntegrateddokam-barotra tafiditra
SteelHouse A2: dokam-barotra ifaneraserana eo amin'ny sehatra rehetra